Drogba oo Juventus ka sokoow diirada u saaran AC Milan. - Caasimada Online
Home Warar Drogba oo Juventus ka sokoow diirada u saaran AC Milan.
Drogba oo Juventus ka sokoow diirada u saaran AC Milan.
AC Milan ayaa Juventus kula dagaalameysa saxiixa Didier Drogba, sida uu qoray wargeyska Daily Mirror.
Sida Nicolas Anelka, weeraryahankii hore ee Chelsea ayaa isha ku haaya inuu kasoo hayaamo kooxda Shiinaha Shanghai Shenhua ka dib wax ka yar hal xilli ciyaareed.
Juventus ayaa xidigaan horaan dooneysay iyadoo dalbaneysa weeraryahanka heerka caalami ee dalka Ivory Coast, kaasoo 35 jir noqonaya sanada soo aadan, wuxuuna qandaraas 18 bilood ah kula jiraa kooxdiisa xilli ay Milan gaartay wareega 16ka Champions League.
Laakiin Milan, sidoo kale waxaa diirada u saaran Mario Balotelli oo xaalad qasan kula jira kooxdiisa Manchester City, waxayna dooneysaa inay keento gegeda San Siro.
Kooxda Silvio Berlusconi ayaa isku diyaarineysa inay iibiso weeraryahanadeeda Robinho iyo Alexandre Pato si ay ugu laabtaan Janaayo dalkooda Brazil.
Drogba, ayaa kusoo laabtay Chelsea si uu tababar ula qaato wuxuuna isku diyaarinayaa Koobka Qaramada Africa ee bisha soo aadan, wuxuuna ka tegay kooxda Stamford Bridge xagaagii ka dib markii ay Blues usoo bandhigtay inuu qandaraaska hal sano ugu kordhiyo.